Ibhokisi.Com yenza Ukwabelana ngeFayile ngokulula
Ibhokisi yenza Ukwabelana ngeFayile ngokulula
NgoLwesibini, Juni 5, 2012 NgoLwesibini, Juni 5, 2012 UMarty Thompson
Wakha waziva unyanzelekile xa uthumela iifayile ezinkulu zolwazi kuwo onke amathemba, abathengi okanye amaqabane eshishini? I-FTP ayikaze ibanjwe njengeyona ithandwayo okanye inokusebenziseka lula, kwaye izinamathiselo ze-imeyile zinemiqobo yazo kunye neebhotile. Ukwabelana ngemikhombandlela ekwabelwana ngayo kwiiseva zangaphakathi zeefayile ukufikelela kumda kunye nokwenza umsebenzi omninzi kumaqela e-IT ngaphakathi.
Ukunyuka kwe ukhomyutha yamafu ngoku ibonelela ngesisombululo esifanelekileyo, kwaye phakathi kweminikelo eyahlukeneyo esekwe kwilifu evumela ukugcina, ukulawula kunye nokwabelana ngomxholo kwi-intanethi, ngokulula njengokuthumela i-imeyile, Ibhokisi. Yintoni ebeka iBhokisi ngaphandle kwezinye kukukwazi kwayo ukusebenzisa imigaqo esisiseko emibini, kodwa kuvavanywa ixesha njengesindululo sayo sokuthengisa esikhethekileyo- elula kunye nesantya.
Ibhokisi ibonelela ngayo yonke into efunekayo ukugcina kunye nokusebenzisana nomxholo kwi-intanethi. Konke okufunekayo kukuchwetheza kwiinkcukacha ezimbalwa ezisisiseko ukuvula iakhawunti kwaye urhuqe iifolda, nokuba ziifayile zemithombo yeendaba, kwindawo yokusebenza ekwabelwana ngayo kwi-intanethi. Ukuthumela ngokulula ikhonkco lendawo eneenkcukacha nge-imeyile okanye umyalezo okhawulezileyo, ovela kwiBhokisi okanye kumxhasi wakho we-imeyile, ivumela abanye ukuba bajonge, bahlele, okanye bafake iifayile, bathathe inxaxheba kwiingxoxo kumxholo, kunye nokunye.
Ibhokisi yenza iindlela eziphambili kunye nezintsonkothileyo ngokulula. Umzekelo, yenza ulawulo lwenguqu olungenamthungo ngokusebenzisa ikhonkco elifanayo lokwabelana naxa kuguqulelwa iinguqulelo ezintsha. Umnini weakhawunti ufumana iinkcukacha, ixesha lokwenyani lomsebenzi wezinto ezenzekileyo ezijolise kumxholo. Ukhetho lwemvume olomeleleyo kunye nokubanakho ukunika ingxelo kubonelela ngolawulo olupheleleyo kumxholo, kunye nokubethela umtya kunye nezinye izinto zokhuseleko kuqinisekisa ukhuseleko lobungqina bobuyatha. Ibhokisi idityaniswa neeapps zikaGoogle kunye neNtengiso, kwaye iyafumaneka kwizixhobo eziphathwayo.
Ibhokisi iza kwiinguqulelo ezintathu: Ibhokisi ye- Ubuntu kunye ne-5 GB yokugcina simahla, Ibhokisi yeShishini, yaye Ibhokisi yeShishini $ 15 / umsebenzisi / inyanga ukuya kuthi ga kwi-2 GB yokugcina nganye.
Ibhokisi yelebheli yenkonzo yayo njenge Ukusebenzisana okulula kwi-Intanethi. Ndicinga ukuba le yinto encinci yokulula njengoko amandla okwenyani entsebenzo anciphile; Nangona kunjalo, yinkqubo eyomeleleyo yokwabelana ngefayile enokuthi iinkampani ezincinci ziqale ngayo kwaye zikhule yonke indlela ukuya kumashishini. Amaqela entengiso anokufumana isixhobo siluncedo kakhulu ekucwangciseni nasekwabelaneni ubungqina, umxholo kunye namanye amaxwebhu ahambelana nenkampani.
tags: Intsebenziswanofayile yokwabelanaintsebenziswano onlineUkwabelana ngefayile kwi-intanethiinkqubo yefayile ekwi-intanethiintsebenziswano yeqela
Ungakuphepha njani ukuzibulala ngokufuduka kwindawo
Jun 5, 2012 ngo-11:07 AM
Kudala ndingumsebenzisi weBhokisi ixesha elide. Ngelixa iswele ezinye iimpawu zeenkonzo ezikhuphisanayo ezifana neDropbox (umxhasi othembekileyo wolungelelwaniso lwedesktop enye), ndifumene ukulula kwayo ngaphezu kokwenza into esweleyo.
Olunye uphawu olukhulu kukukwazi ukongeza ugcino olongezelelweyo xa ucebisa inkonzo kwabanye. Kuwo wonke umsebenzisi ocetyiswayo obhalisa, ufumana i-5 gigs yokugcina eyongezelelweyo. Ndifikelela kwi-50 gigs (!) Kweli nqanaba, ngoko ke ndityalwe ngokupheleleyo kwiBhokisi.